Kooxda Baecelona oo gurigeeda awood ugu sheegatey Kooxda PSG – MANABOLYO NEWS
Kylian Mbappe ayaa seddexleey u tuuray Barcelona, ​​Antoine Griezmann ayaana qaba inuu weeraryahanku dhawaan noqon doono kan ugu fiican adduunka.
Kylian Mbappe ayaa sii wadi kara inuu la mid noqdo Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ka dib markii seddexleeydiisii ​​uu arkay Paris Saint-Germain oo 4-1 ku xasuuqday Barcelona Champions League.
Taasi waxay ahayd sida sharafta leh ee uu u qaatay Mbappe saaxiibkiisa xulka France Antoine Griezmann, kaasoo ku sugnaa dhamaadka soo dhaweynta geesinimada dalkiisa ee garoonka Camp Nou talaadadii lugta hore ee wareega 16ka.
Messi ayaa hogaanka u qabtay Barca rigooradii ay ka dhalisay Champions League xilli ciyaareedkiisii ​​17aad oo isku xigta, isagoo la mid ah rikoor uu dhigay halyeeyga Real Madrid Raul.
Wixii intaa ka dambeeyay, si kastaba ha noqotee, waxay ahayd bandhigii Mbappe iyadoo Barcelona ay la kulantay guul darro kale oo ceeb ah marxaladda ugu weyn.
Gool barbardhac ah oo uu abuuray Marco Verratti ayaa la micno ahaa inay wax walba bartanka u jireen isla markaana Mbappe uu shaqada ka ceyriyay wiilasha Mauricio Pochettino saacadda ka dib wuxuuna dhameystiray howsha isagoo dhameystiray geeska kore ka dib markii Moise Kean uu madax ku dhaliyay Leandro Paredes laad xor ah.
“PSG waxay heysataa xidig mustaqbal aad u weyn kaasoo la mid noqon doona Leo iyo Cristiano,” Griezmann ayaa sidaa u sheegay RMC Sport.
Kaliya waan u hanbalyeyn karaa.
Mbappe ayaa noqday ciyaaryahankii seddexaad ee taariikhda Champions League ee seddexleey ka dhaliya Barcelona iyo kii ugu horreeyay ee ku dhowaad rubuc qarniga ka dib xiddiga Newcastle United Faustino Asprilla iyo Dynamo Kiev's Andriy Shevchenko oo labaduba ku guuleystay qaab ciyaareedka 1997.
Waxay ahayd waxqabad dhan-wareeg ah oo ka yimid 22-sano jirkaan, kaasoo sidoo kale sameeyay afar baas oo muhiim ah si uu fursado ugu abuuro asxaabtiisa kooxda.
“Waxaan ubaahanahay inaan yeelano ciyaar kaamil ah, ma aanan yeelin iyaguna way sameeyeen, waa guuldaro weyn” ayuu yiri Griezmann.
“Diyaar ayaan aheyn, waxaan dooneynay inaan ciyaarno kulan weyn, laakiin iyagu way naga fiicnaayeen, ma jiraan wax la yiraahdo, Kylian wuxuu lahaa habeen aad u fiican”.
Barca ayaa u baahan soo celin aan macquul aheyn oo geesinimo leh taasoo u aragtay inay rogeen guuldaradii 4-0 ee lugtii hore ee ka soo gaartay PSG isla marxaladda 2017 markii ay aadeen Paris si ay ugu soo laabtaan bisha soo socota.
In kasta oo qaddiyadaha si weyn loo adkeeyay kooxda Ronald Koeman, Griezmann ma quusan.
"Waa inaad halkaas aado si aad u guuleysato oo aad xaaladda u rogto. Uma aadi doonno halkaas dalxiis ahaan," ayuu raaciyay.
Kooxaha Chelsea iyo Manchester United ayaa barbardhac 0-0 ah ku kala baxay